Global Voices teny Malagasy » Mahomby amin’ny fanakànana an’ireo media mpandàla an’i Pékin ve ny lalàna manohitra ny fitsofohana an-tsokosoko ao Taïwan ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Avrily 2020 8:47 GMT 1	 · Mpanoratra Huang HungYu Nandika (en) i Filip Noubel, Sylvia Aimée
Sokajy: Taiwan (ROC), Fahalalahàna miteny, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Ny Filoha lefitra Taïwanaise teo aloha sy sorakaliana an'i Lien Chan, Filoha am-boninahitry ny Kuomintang, ho an'ny vovonana MasterChain. Avy amin'ny Twitter an'i MasterChain.
Ny 31 Desambra 2019, nankatoavin'i Taïwan ny lalàna iray mikendry ny hanoherana ny dindon'ireo “”hery vahiny mpankahala ” ao amin'ny firenena, anisan'izany ny fepetra mikasika ny vaovao diso. Niteraka adihevitra nivaivay ilay lalàna manohitra ny fitsofohana an-tsokosoko, ary marobe no mihevitra azy io ho toy ny andrana hifehezana ny dindon'i Pékin ao Taiwan. Taorian'ny nandraisana ilay lalàna, nambaran'ny vovonana MasterChain , media mpomba an'i Pékin, fa ho fanoherany dia mety handao ny tsena ao Taiwan izy. Raha ny sasany kosa nanahy hoe mety hisy fiantraikany mankany amin'ny fanakendàna ny fahalalahana maneho hevitra ilay lalàna, ny hafa indray mandika ny fialàn'ireo mpampahalala vaovao ho toy ny porofo fa tena resin'ilay lalàna lahatra tokoa tsy hitsofoka an-tsokosoko ireo “media mena” .
Ny tena raràn'ilay lalàna miady amin'ny fitsofohana an-tsokosoko dia ireo vondrona avy any ivelany, sakanany tsy hitsabaka amin'ny resaka fifidianana, ny fandresena lahatra ary ny fandraisana anjara amin'ny pôlitika, ary hatramin'ny fanelezana vaovao diso momba ny fifidianana mba hanakorontanana ny filaminana sôsialy.
Nandritra ny adihevitra momba ilay drafitra, ny New Power Party  izay miady ho an'ny fahaleovantenan'i Taiwan dia nanosoka fanitsiana marobe mikendry mivantana ireo “media mena”. Tafiditra ao anatin'izany ny fandraràna ny rehetra tsy hanaraka ny torolàlana omen'ny Antoko Kaominista Shinoa (PCC) momba ny fampandehanan-draharaha, ny famatsiambola na ny fanarahana maso ny haino aman-jery, sy ny fanaovana dokambarotra pôlitika na doka amin'ny anaran'ny antoko PCC. Fa taty amin'ny farany, ny antoko demaokraty liampivoarana (PPD) eo amin'ny fitondràna dia nandà azy ireny satria tian-dry zareo ny hanàna ny feo midadasika kokoa momba ny filalaovana ataon'ireo governemanta vahiny tsy mpankasitraka ny resaka fifidianana, ary indrindra fa ny PCC. Kanefa, avy eo ny Filankevitra momba ny raharaha avy amin'ny Tanibe  nanosoka hevitra hoe ny resaka fitsofohana an-tsokosoko ataon'ireo “media mena” dia tokony resahana ao anatin'ny fenitry ny lalàna momba ny fampielezampeo sy ny fahitalavitra.
MasterChain sy ny ‘fotopampianarana mandatehezana miray’
Ny tebiteby momba ny dindon'i Pékin ao anatin'ny tontolon'ny media ao Taiwan dia ampahany betsaka amin'ireo ahiahy goavana kokoa momba ilay antsoin'i Pékin hoe “mandatehezana miray ” na vovonan-kery iray ara-pôlitika, ara-tafika, ara-pinoana hanoherana ny fahaleovantenan'i Taiwan.
Mitàna toerana goavana be ao anatin'ireo hetsiky ny MasterChain ireo fifamatorana pôlitika eo amin'ny roa tonta. Tamin'ny Aprily 2019 no natomboka ilay sehatra, ary lasa toeram-pivarotana voalohany ao Taiwan nomena alàlana  hanokatra birao any Shina izy. Ny mpanorina ny MasterChain, Chuang Li-Ping, dia nanoratra boky iray manohana ireo marimaritra 92, fantatra ihany koa amin'ny hoe “Marimaritry ny Shina Tokana”, ary ny foiben'ny hetsik'ilay orinasa sy ny foibe fampiroboroboany ny fandraharahany dia miorina any aminà tanàna roa lehibe ao amin'ny tanibe shinoa.
Ny tetikadin'ilay sehatra, amin'ny fandraisana maromaro avy amin'ireo manampahefana fahiny tao Taiwan ho isan'ny tomponandraikitry ny media, dia hitan'ireo manampahaizana ho toy ny ezaka hamoronana tambajotram-pitsikilovana miampita ny helodrano iraisana.
Chang Yu-shao, mpikaroka iray ao amin'ny “Cross-Strait Policy Association“, manipika fa :
Ny famoronana sary, ny fitsikilovana sy ny fampiroboroboana tambajotra ary ny fotokevitry ny asa ilaina ho amin'ny fanafihana ara-pôlitika no asa fototra ho an'ny “mandatehezana miray” an'ny Antoko Kaominista Shinoa (PCC). Miaraka fenon'ny MasterChain daholo ireo fepetra telo ireo.
Na izany aza, misy vitsivitsy ireo toeram-pamoahana vaovao izay maneho mivantana ny fombàny an'i Pékin, toy ny ataon'ny MasterChain. Ny ankamaroan'ireo toeram-pitsinjaràna vaovao mpomba an'i Pékin dia mitahiry ny fifandraisany amin'ny tanibe ho zavatra afenina na tsy mivantana, ny Want Want Media Group  no ohatra miavaka amin'izany.
Tany aloha tany, ny filohan'ny Want Want, Tsai Yen-ming, dia nanao fanambaràna fanohanana ny fijerin'ny PCC ary nivarotra pejy maromaro tao anatin'ny gazetiny ho an'ny governemanta shinoa. Hita ihany koa avy eo fa ny gazety “China Times” an'ny vondrona Want Want dia nahazo famatsiambola avy amin'ny governemanta shinoa .
Araka ny lazain'ireo loharano  avy amin'ny sehatra media tsy miankina ao Taiwan “Up Media”, talohan'ny fifidianana tamin'ny Janoary 2020, nilazàn'i Tsai Yen-ming  ireo mpitantana ambony tao anatin'ny vondrona media misy azy mba hanatsahatra ny fandrakofana ireo hetsipanoherana ilay lalàna miady amin'ny fitsofohana an-tsokosoko, mba tsy hahitàna mibaribary be loatra hoe mpomba an'i Pékin ry zareo. Na izany aza anefa, tany ambadiky ny sehatra tany, notohizan'ilay vondrona media ny fanosehana ny fitantaràna hoe mandeha mankany amin'ny fanoherana ny fahalalahana maneho hevitra ilay lalàna miady amin'ny fitsofohana an-tsokosoko. Nokendreny tamin'izany ny hanairana fanehoankevitra matanjaka avy amin'ny fijerin'ny daholobe sy hanetsiketsehana ny fampielezankevitra Kuomintang (KMT) mpomba an'i Pékin tamin'ny fifidianana.
Na ohatra aza ilay gazety mpiseho isanandro China Times , izay an'ny vondrona Want Want, namoaka fanambaràna iray nandàvany ny fisianà tsindry avy any Pékin, nanomboka namoaka matoandahatsoratra nanoherany ilay lalàna mandrara ny fitsofohana an-tsokosoko izy talohan'ny fifidianana, tamin'ny filazana hoe natao hikendrena ny media ao anatin'ny vondrona Want Want ilay lalàna.
Manohitra ny fitsofohana an-tsokosoko sa ny media mena e?
Ny May 2019, marobe ireo media tao Taiwan no nahazo fanasàna ho any Pékin mba handray anjara tamin'ny “Zaikabe faha-4 an'ny Media miampita ny helodrano iraisana “. Ilay hetsika dia noheverina ho toy ny fomba iray hanamafisan'ny PCC ny “mandatehezana miray” eny anivon'ny sehatry ny asa fanaovana gazety.
Ny volana taorian'io, nisy diabe natomboka tao Taiwan “ho fandàvana ny media mena sy ho fiarovana ny demaokrasia ao Taiwan” . Hetsika santatra avy amin'i Hwang Kuo-chang, mpikambana iray ao anatin'ny Legislative Yuan  tamin'izany fotoana izany, izay nanao antso tamin'ny governemanta mba hamerina handinika ireo lalàna vitsivitsy no sady nanolotra tolodalàna iray hiadiana amin'ny fitsofohana an-tsokosoko.
Noho ny fisian'ny fifamatorana akaiky eo amin'ny Taiwan sy ny tanibe Shina, ny tombontsoa ara-pandraharahana ananan'i Shina dia afaka mora foana ny ho takona, mitarika ireo sangany mpampahalàla vaovao hisalasala momba izay mety ho fahombiazan'ilay lalàna miady amin'ny fitsofohana an-tsokosoko.
Fanampin'izany, sarotra arahana maso raha ny aterineto, ary azon'i Pékin ianteherana ireo masoivohom-baovao ao Singapaoro sy Malezia mba hametraka ny dindony amin'ny fijerin'ny daholobe ao Taiwan, tsy ilàna akory ny fisiany any amin'ilay nosy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/04/28/147095/
 hery vahiny mpankahala: https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-infiltration_Act
 New Power Party: https://en.wikipedia.org/wiki/New_Power_Party
 Filankevitra momba ny raharaha avy amin'ny Tanibe: https://en.wikipedia.org/wiki/Mainland_Affairs_Council
 mandatehezana miray: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Front_Doctrine
 nomena alàlana: https://englishnews.ftv.com.tw/read.aspx?sno=EB4DFE77D5D59EBDDFBDCAABCFFBDB5F
 marimaritra 92, : https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Consensus
 manipika fa : https://opinion.udn.com/opinion/story/12561/4210026
 Want Want Media Group: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%BA%E6%97%BA%E4%B8%AD%E6%99%82%E5%AA%92%E9%AB%94%E9%9B%86%E5%9C%98
 famatsiambola avy amin'ny governemanta shinoa: https://www.storm.mg/article/1207364
 Tsai Yen-ming: https://www.icrt.com.tw/info_details.php?mlevel1=6&mlevel2=12&news_id=159018
 China Times: https://www.chinatimes.com/?chdtv
 Zaikabe faha-4 an'ny Media miampita ny helodrano iraisana: https://www.storm.mg/article/1274352
 “ho fandàvana ny media mena sy ho fiarovana ny demaokrasia ao Taiwan”: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E3%80%8C%E6%8B%92%E7%B5%95%E7%B4%85%E8%89%B2%E5%AA%92%E9%AB%94%E3%80%81%E5%AE%88%E8%AD%B7%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%B0%91%E4%B8%BB%E3%80%8D%E9%81%8A%E8%A1%8C